ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप ... खरीद गर्नुहोस् | Martech Zone
ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप ... खरीद गर्नुहोस्
सोमबार, सेप्टेम्बर 6, 2010 सोमबार, मार्च 14, 2016 Douglas Karr
कोही पनी तपाईंको अर्को ट्वीट, स्थिति अपडेट वा ब्लग पोष्टको लागि अर्को खरीद गर्नका लागि पर्खिरहेका छैनन्। त्यहाँ सधैं सम्भावना हुन्छ कि तपाई कसैलाई किन्न प्रेरित गर्नुहोस्, तर यो अनुमान गर्न असम्भव छ कि जब सम्भावितहरू उनीहरूको अर्को खरीद गर्न तयार हुन्छन्। यसैले त्यहाँ हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईंको संभावनाहरू छन् हो निर्णय गर्न को लागी तयार छ।
तिनीहरू कहाँ हुनेछन्? हामी हालका अनलाइन व्यवहारबाट बुझ्दछौं कि बहुमत अनलाइन सम्भावितहरूले खोजी ईन्जिन प्रयोग गर्नेछ। उनीहरूले कुन कुञ्जी शब्दहरूको खोजी गर्ने छन्? के उनीहरु स्थानीय अनुसन्धान को लागी खोजी गर्न जाँदैछन्? के तपाइँ खोज ईन्जिनमा परिणामहरूमा हुनुहुन्छ जुन उनीहरूले हेरिरहेका छन्? यदि उनीहरूको नेटवर्कमा श्रोत खोज्छ भने, के तपाईं विश्वस्त स्रोत हुनुहुन्छ जुन त्यहाँ उपस्थित छ?
ब्लगिंग एक महान अनलाइन गतिविधि हो किनभने यसले तपाईंलाई जानकारी ड्रिप गर्न र उपलब्ध हुन अनुमति दिन्छ जब संभावना समाधानको लागि खोजी गर्दैछ। यो ब्लग गर्न पर्याप्त छैन, यद्यपि। हामी हाम्रा आगन्तुकहरूलाई हाम्रो फिडमा सदस्यता लिन, न्यूजलेटर द्वारा सदस्यता लिन, ट्विटरमा हामीलाई अनुसरण गर्न, फेसबुकमा फ्यान गर्न, वा हामीलाई लिंक्डइनमा जडान गर्न जोड दिन्छौं ताकि हामी खरीदको लागि तयार हुँदा तिनीहरू त्यहाँ हुने मौका पाउँदछन्।
ईमेल मार्केटिंग ती ग्राहकहरु जो फेरि चाँडै 'हुन सक्छ' पुन: जडानको लागि एक उत्तम माध्यम हो। हुनसक्छ तिनीहरूले अनलाइन अनुसन्धान गरिरहेछन्, खोज ईन्जिनको माध्यमबाट तपाईंलाई फेला पार्नुभयो, र सदस्यता लिए ताकि तिनीहरूले तपाईंमा नजर राख्नेछन् र तिनीहरू खरीद गर्न तयार हुँदा जडान गर्नुहोस्।
सामाजिक नेटवर्कहरू प्राधिकरण र विश्वास निर्माण गर्न, र तपाईंको व्यवसायको व्यक्तित्व उजागर गर्नका लागि उत्कृष्ट माध्यम हो जसले तपाईंसँग व्यापार गर्न चाहन सक्छ। फेरि, तपाइँको संभावना को क्षितिज मा रहन जारी राखेर ... तपाईं त्यहाँ हुनेछ जब तिनीहरूले खरीद गर्ने निर्णय गर्छन्।
ड्रिपिंग पोष्टहरू, टपकाउने टिप्स, टिप्ने टिप्स, र ड्रिपि updates अपडेटहरूले मात्र तपाईलाई दिमागबाट माथि राख्दैन, यसले तपाईंको नेटवर्कमा भएका व्यक्तिहरूबाट तपाईंको फलोअरहरूको नेटवर्कमा भएका व्यक्तिहरू, र तिनीहरूका अनुयायीहरूको नेटवर्कहरू, र मा र मा विस्तार गर्दछ।
हाम्रो सम्भावित नेटवर्कहरूमा दिमागको शीर्ष हुनु महत्वपूर्ण छ, तिनीहरूको नेटवर्क भित्र विश्वास र अधिकार निर्माणले उनीहरूले हामीलाई खरीद गर्ने अवसरमा उनीहरूलाई बोलाउने हाम्रो सम्भावना सुधार गर्दछ। मानिसहरू कहिलेकाँही सोध्छन्, के मैले फेसबुक वा ट्विटरमा श्रोत राख्नु पर्छ? मैले ईमेल मार्केटिंग वा खोज इञ्जिन अनुकूलनमा लगानी गर्नु पर्छ? के म ब्लग सुरु गर्ने वा अनलाइन विज्ञापन गर्ने?
यसमा कुनै सहि उत्तर छैन। प्रश्न तपाईंको मार्केटिंग लगानीमा फर्कने कुरामा निर्भर छ। यदि हामी लिंक्डइनमा एक घण्टाको लागि मासिक भाग लिन्छौं भने, भनौं कि त्यो घण्टा consultation २ .० को मूल्यवान् छ परामर्शमा ... त्यो $ ,250००० वार्षिक हो। यदि मैले लिंक्डइनबाट एक सीसाबाट $ २ contract,००० को सम्झौता प्राप्त गरें, के यो मूल्यवान थियो? पक्कै पनि यो थियो। प्रश्न छैन जहाँ, प्रश्न यो छ कि तपाईं कसरी यी सबै माध्यमहरूमा प्रभावकारी रूपमा ड्रिप अभियानहरू सन्तुलित र स्वचालित गर्न सक्नुहुनेछ।
एकल मध्यममा शर्त नराख्नुहोस्, तपाईंको सम्भावना कहिँ पनि हुन सक्छ। एक चोटि तपाईले तपाईको उत्तम माध्यमहरू सब भन्दा बढि बढि लिड्ससँग पहिचान गर्नु भएपछि, तपाई ती माध्यमहरुमा अधिक मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ।
ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप ... र खरीदको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
टैग: ब्लग पोष्ट फ्रिक्वेन्सीब्लगिंगसामग्री मार्केटिङकर्पोरेट ब्लगिड्रिपआवृत्तिपालनपोषण
तपाईंको ब्लग वा साइटको नि: शुल्क समीक्षा पाउनुहोस्